Soo dejisan Busuu 6.11.3.52 – Vessoft
Soo dejisan Busuu
Busuu – software ah si ay u bartaan ama loo horumariyo aqoonta afafka qalaad. Software wuxuu isticmaalaa qoraalka is-dhexgal kala duwan, ka hadlay wada hadalada iyo imtixaanada kuwaas oo awood u siinaya inay bartaan waxyaabaha aasaasiga ah ee erayo shisheeye. Busuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u bartaan xirfadaha qoraalka iyo ku hadalka ka soo bilow iyo heer sare. Sidoo kale software awood u diro jimicsi ku qoran si aad u hubiso by kuwa kale ee isticmaala oo iska hubi aqoon gudbikaraa oo ah af gaar ah. Busuu kuu ogolaanayaa inaad si ay ula socdaan horumarka aqoonta kuu gaarka ah ee luqadaha ajnabiga, taas oo kordhinaysa la guul layliyada kala duwan. Software interface waxay leedahay dareen ah oo si sahlan ay u isticmaalaan.
Haboon iyo xiiso waxbarasho ee luqadaha ajnabiga
Joogitaanka qalab kala duwan waxbarashada
Kormeero wixii horumar ah ee aqoonta kuu gaarka ah
Hubinta layliyada ee uu qoray dadka kale ee
Easy in ay isticmaalaan interface
Comments on Busuu:
Busuu Software la xiriira:
Waxbarashada Codsiga waxaa la set oo ah qaab ciyaareed xiiso leh ka mid ah dadka ugu caansan ee meelo kala duwan. In software ku jiraan diiwaanka badan oo la tarjumo luqadaha kala duwan iyo raacidda ee subtitles.
العربية, English, Українська, Français... Duolingo 3.23
Waxbarashada Tool u ah barashada raaxo luqadaha iyo hadlayay horumarinta xirfadaha shisheeye. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u bartaan tiro badan oo afaf badan iyo waxaa ka mid ah hababka kala duwan ee waxbarasho.
العربية, English, Українська, Français... Mova 1
Waxbarashada software The si loo horumariyo aqoonta luqada Yukreeniyaan. software ka kooban yahay xeerar badan oo kooban iyo maktabad weyn oo jimicsi oo xiiso leh sharaxaad ah.
Games Istiraatiijiyada ay caan ah dhismaha iyo horumarinta magaalada. Fursado ballaaran ee dhismaha, dhaqaalaha iyo awooda fulinta waxaa lagu furay ciyaaryahanka.
العربية, English, Українська, Français... Microsoft Excel 16.0.6131.1008
Office Software inay la shaqeeyaan barasantigareeyaan ka Microsoft ee. Software waxa uu leeyahay tiro balaadhan oo ah qalab iyo qaababka ay u xaalkaa waraaqaha kuwaas oo si buuxda u la jaan qaada qalabka kale.
العربية, English, Українська, Français... Puffin Web Browser Free 4.6.0.2036
Kadib Browser caanka la xawaaraha sare ee bogga loading. Sidoo kale software sir gaadiidka si ay u difaacaan saamayn dibadeed.
العربية, English, Українська, Français... Blokker 2.0.9
Programka sirta Ilaalinta xogta ku ool ah oo qalab ah oo kadhan ah dadka aan la ogalayn. Blocks software ayaa bilowgii codsiyada iyo adeegyada doortay.
English, Français, Español, Deutsch... Uplay 1.3.26
Games Codsiga rasmiga ah ee dukaanka digital ka adeegga caanka ah Ubisoft. In software waxaa jira noocyo kala duwan oo badan oo kulan kuwaas oo la heli karo si ay u soo bixi.
English, Українська, Français, Español... Wattpad 6.7.2
Akhristayaasha E-buugga Ku haboon waxaa dheer in ay baadhaan oo akhriyaan buugaagta. Software waxaa ka mid ah maktabadda weyn ee suugaanta qaybsan qaybaha kala duwan.
العربية, English, Українська, Français... Opera 30.0.1856.95530
Kadib Browser Fast joogis raaxo ee internet-ka. Software ayaa si toos ah ay habaysaa size la doonayo iyo qaabka qoraalka ah ee bogga internetka ah daaha qalabka.
العربية, English, Українська, Français... Pou 1.4.67
Games Ciyaarta ayaa si is ogow of caafimaad, fayo-qabka, tamarta iyo sifooyinka kale ee xayawaanka. Ciyaarta Kumaan balaadhan oo ah waxyaabaha kala duwan ee xayawaanka ee dalwaddii furmay.
العربية, English, Українська, Français... WPS Office 9.5.3.2273
Office software ah in ay la faylasha nooca xafiiska shaqeeyaan. Codsiga waxaa uu leeyahay oo dhan qalabka loo baahan yahay in la abuuro iyo edit dukumentiyada.
العربية, English, Українська, Français... Clash of Clans 8.212.12
Games Kulan istiraatiijiyadda aad u horumarin lahayd tuulo u gaar ah oo loo ballaariyo dhulka la isticmaalayo habka ay u qabashada. Kulankaan ayaa waxa uu isticmaalaa la sawiro 3D fiican iyo siyaabo kala duwan oo ka mid ah horumarinta.
العربية, English, Українська, Français... Easy Taxi 9.9.2-b28
Qaar kale waxay Software ee jaale taxi degtaa dalalka kala duwan ee dunida. Codsiga waxaa si toos ah ugu baaqaysaa taxi ee kuugu dhow oo soo bandhigay ay dhaqdhaqaaq khariiradda.
العربية, English, Українська, Français... Humble Bundle 2.1.2
Games software ah in soo bixi kulamada soo iibsatay iyada oo loo marayo adeegyada caanka ah. software wuxuu siiyaa awood u leh inay u aragto liiska of content iibsaday iyo si aad u cusboonaysiiso haddii loo baahdo.